M/wayne Shariif oo ka degay Jabuuti iyo R/wasaare Farmaajo oo ku sii jeedda Maraykanka. – Radio Daljir
M/wayne Shariif oo ka degay Jabuuti iyo R/wasaare Farmaajo oo ku sii jeedda Maraykanka.
Muqdisho, May, 07 – Wafti sadex jiho ah oo ka socda dawladda Federalka ah ee Somaliya ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho, kuwaas oo u kale duulay waddamada Maraykanka, Jabbuuti iyo Turkiga ayna kala hoggaaminayaan M/shariif, R/wasaare Farmaajo iyo Wasiirka qorshaynta ahna R/wasaare ku xigeenka Dr C/wali Max?ed Cali.
Waftiga Madaxweynaha ayaa u tagay Dalka Jabbuuti si uu uga qaybgalo xafaladda dhaarta ee M/weyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale loo doortay inuu noqdo hoggaamiayaha dalkaasi taas oo birri ka dhici doonta halkaasi, balse warar ayaa sheegaya in labada M/weyne ay yeelan doonaan kulan gaar ah oo ku saabsan xaaladda Somaliya.
M/weyne Geelle ayaa lagu eedeeyey inuu si toos ah u faragaliyo xaaladda Somaliya, waxaana uu dhawaan ku gacan sayray shirkii lagu qabtay magaalada Nayroobi, kaasi ay soo qabanqaabisay Qaramada Midoobey ayna ka qaybgaleen inta badan maamullada Somalid balse uu diiday M/wayne Shariif Sh. Axmed oo ay siyaasad ahaan isku dhaw yihiin M/weyne Geelle.
R/wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waftigiisa ayaa iyaguna u ambabaxay Magaalada New Yourk ee dalka Marayka si uu uga qaybgalo shirka golaha ammaanka ee halkaasi ka furmaya 10-ka bishan, waxaana la filayaa in R/wasaaruhu uu goobtaasi khudbad ka jeedin doono, taasi oo uu kaga hadlayo xaaladda Somaliya gaar ahaan xilliga kale guurka iyo dagaalka ay dawladdu kula jirto xarakada Al-shabaab.
Waftiga sadexaad oo uu hoggaaminayo R/wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka qorsheynta ee dawladda federalka ayaa u duulay dalka Turkiga, halkaas oo ay kaga qayb gali doonan shir ay 10-kii sanaba mar yeesheen waddamada dhaqaalahoodu soo korayo oo ay Somaliyana ku jirto, Waxaana uu shirkaasi furmayaa 9-ka bishan May.
Arrintaan ayaa imaanaysa iyadoo dad badani ay qabaan in dawladda federalku ay wakhti badan iyo dhaqaale badanba ku bixiso safarada dibadda.